Al-Shabaab oo soo bandhigay askar ay sheegeen inay isku soo dhiibeen – Idil News
Al-Shabaab ayaa degaanka Abooreey oo hoostaga degmada Buul- Burde ee Gobolka Hiiraan waxaa ay kusoo bandhigeen 11 Askari oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen Ciidamada dowladda Soomaaliya balse isku dhiibay Al-Shabaab.
Askartan ayaa Al-Shabaab sheegeen inay ka howlgeli jireen magaalloyinka, Beledwyene, Buulo-Burde, Muqdisho, Maxaas & degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud, kuwaas oo ka kala tirsanaa Milalteriga, Nabadsugida & Kuwa macaawiisleyda.
Qaar kamid ah Askata ay Al-Shabaab soo bandhigeen oo hadlay ayaa sheegay inay qeybo kamid ah Gobolka Hiiraan uga qeyb qaataan dagaalo ka dhan ahaa Ururka Al-Shabaab, isla markaana duruufo soo wajahay darteed ay isaga soo tageen Ciidamada dowladda Soomaaliya.
Saraakiisha Ciidamada dowladda gaar ahan qeybta 27aad ee ka howlgasha Gobolada Hiiraan & Shabeellaha Dhexe weli kama hadlin askarta ay soo badnhigeen Al-Shabaab oo ay ku sheegeen inay kasoo goosteen Ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dhowr jeer oo hore ayaa Dowladda Soomaaliya & Al-Shabaab waxaa ay siyaabo kala duwan u soo bandhigeen askar iyo saraakiil ay sheegeen in midba midka kale uu isku soo dhiibay, waxaana ay kusoo aadeysaa xilli todobaadyadii la soo dhaafay ay dhaceen dagaalo u dhaxeeyay Ciidamada dowladda & Al-Shabaab.